ज्यान बच्यो, विष मुसाले खाए पछि… | eAdarsha.com
ज्यान बच्यो, विष मुसाले खाए पछि…
पोखराकी ४० वर्षीय रीता (नाम परिर्वतन) श्रीमानसँगको सम्बन्ध बिग्रेकोमा निक्कै तनाबमा छिन् । तनाब सामना गर्न एक वर्षदेखि औषधीको सहयोग लिएकी छिन् । एक्लो महसुस हुने, मन आत्तिने, निन्द्रामा गडबढी हुने समस्या, खाना रुचि नहुने, श्वासप्रश्वास बढेको अनुभव हुनेजस्ता समस्याहरुलाई व्यवस्थापन गर्न औषधीले ठूलै भूमिका खेलेको छ । औषधी छुटाउँदा उनलाई समस्याहरु बल्झन्छन् । परिवारले औषधीमा आश्रित भयो भनी विभिन्न उपनामहरु दिने गरेको छन् । जसका कारण रीताले आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठामा आँच आएको बताउँछिन् ।
‘तिम्रो मन कमजोर भएर हो, औषधी खानु पर्देन, बिना कारण चिन्ता लिने’ भन्दै श्रीमान र छोराहरुले नराम्रो व्यवहार गर्दे आएको उनको गुनासो थियो । एक वर्षदेखि उनी चिन्ता एवं उदासीनताको व्यवस्थापनका लागि औषधी सेवन गरिरहेकी छिन् । ‘घरमा राम्रो छैन्, माइतमा कोही छैनन्, एक्ली भएकी छु,’ उनले भनिन् । औषधीले मात्र उनलाई बाँच्ने प्रेरणा दिएको छ । श्रीमानको व्यवहारले गर्दा उनलाई बेलाबेला मर्ने सोच आइरहन्छ । मर्नका लागि विगत एक महिनादेखि घरमा विष किनेर राखेकी छिन् । उक्त कुरा परिवारका सदस्यहरुलाई जानकारी छैन । विष उनले पूजा कोठामा लुकाएर राखेकी थिइन् । जब मनका सहनै नसक्ने पीडा हुन्छ तब सेवन गर्ने उनको योजना छ ।
‘जीवनलाई समाप्त गर्न त्यति सजिलो छैन,’ रीताले भनिन् । उनले एक वर्ष पहिले मर्नका लागि प्रयास गरेका थिइन् । छोराले गण्डकी अस्पताल लगेर बँचाए । अस्पतालमा मजस्तो अर्को महिला आत्महत्याको प्रयास गरेर ल्याएको देखेँ । मर्नलाई धेरै गाह्रो हुने रेहछ उनको पीडा देखेर थाह भयो रीताले सुनाइन् । उक्त घटनाले उनलाई बाँच्न प्रेरणा थपेको थियो । तर घर परिवारको व्यवहारले भने बारम्बार एक्लोपनको महसुस गराइन्छ ।
मनमा गाह्रो भयो भने उनले पोखराकै मनोविमर्शकर्ता जमुना शर्मालाई फोन गर्ने गर्छिन् । आफ्नो भावनाहरु सुनाउँछिन् । कोसिस नेपालको टोल फ्रि नम्बर कण्ठै छ । गत साता उनलाई मनमा धेरैनै पीडा भयो । मनोविमर्शका लागि कोसिस नेपाल पुगिन् । मर्नका लागि तयार पारेको कुरा सुनाइन् । मनोविमर्शकर्ताहरु उनको व्यवहार देखेर डराए । बजारबाट उनको घरमा तत्कालै पुग्ने अवस्था थिएन् । मनोविमर्शकर्ताहरुसँग उनले विष हटाउने प्रतिबद्धता गरिन् । कुराकानी पछि घर फर्किइन् ।
भोलिपल्ट यो स्तम्भकारले फोन लगायो । उनले फोन उठाइन् । मैले सोद्धा ‘दिदी के छ खबर, आरामै हुनु हुन्छ ? विष फ्याक्नुभयो ?’ उनले उत्तर दिइन् ‘भाइ त्यो विष त मुसाले पो खाएछ । एउटा मुसो मरेछ ।’ मलाई हाँसो उठ्यो । हाँसो रोक्न सकिनँ । उनी पनि हाँसिन् । उनले भनिन्, ‘कुचोले बढार्नु पर्ने कसिंगर हावाले उडायो ।’ मैलै पनि सहमति जनाएँ । केही गाह्रो भयो भने फोन गर्नु है भन्दै फोन काटेँ ।
अहिलेलाई उनको आत्महत्या गर्ने सम्भावना टरेको छ । तर परिवारको व्यवहार र चिन्ताले सताइरह्यो भने फेरि उक्त व्यवहार दोहोरिएला भन्न सकिन्न । रीताजस्तै अहिले धेरै महिला दिदीबहिनी एवं दाजुभाइहरु आफ्नो समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आत्महत्यालाई विकल्प रोज्न थालेका छन् । के आत्महत्या गरेर समस्याको समाधान होला ?
साथै हाम्रा हरेक गाउँ, सहरका पसलहरुमा मुसा मार्ने विष र अन्य विषादीजन्य पदार्थहरु प्रशस्तै भेटिन्छन् । कम्तीमा व्यपारीहरुले त्यस्ता सामग्रीहरु नचिनेको व्यक्तिलाई नदिने । बढी तनाब, चिन्ता, घरमा खटपट भइरहेको भन्ने जानकारी छ भने विषादी सकिएको छ भन्ने उत्तरहरु दिएर पनि सहयोग गर्नुपर्छ । विरक्त मुडमा एक्लै विषादी लिन दिएको छ त्यस्तो समयमा रोक्नुपर्छ । विश्वासलाग्दो व्यक्तिलाई मात्र विषादीजन्य पदार्थहरु बेचबिखन गर्नु जरुरी छ । जसले केही हदसम्म भए पनि सम्भावित जोखिमबाट बचाउन सहयोग गर्छ ।
विश्वासलाग्दो व्यक्तिलाई मात्र विषादीजन्य पदार्थहरु बेचबिखन गर्नु जरुरी छ । जसले केही हदसम्म सम्भावित जोखिमब कम गर्न सहयोग गर्छ
१५ देखि २९ वर्षको उमेरलाई बढी जोखिमको रुपमा लिइन्छ । यसै उमेर समूहमा आत्महत्या मृत्युको दोस्रो कारकतत्व बनेको छ । यही तथ्यांक बढ्दै गयो भने हरेक वर्ष आत्महत्या गरी मर्नेहरुको संख्या १० लाखभन्दा बढी हुनेछ । अनुसन्धानले जनाए अनुसार १ जनाले आत्महत्या गर्दा कम्तीमा १ सय ३५ जना व्यक्तिहरुलाई त्यसको मानसिक र सामाजिक असर गर्छ । विश्वभर हरेक ४० सेकेन्डमा १ जनाले आत्महत्या गर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको आँकडा छ । हरेक वर्ष झण्डै ७ लाखभन्दा धेरैले आत्महत्या गर्ने गर्दछन् ।
नेपालमा भने आत्महत्या गर्ने र प्रयास गर्नेहरुको सही तथ्यांक छैन । प्रहरीको तथ्यांकलाई आधार मान्दा आत्महत्या दर बढेको देखिन्छ । दैनिक १६ जना नेपालीले आत्महत्या गर्ने पछिल्लो तथ्यांकले जनाएको छ । केही समय पहिले कास्की जिल्लामा गरिएको एक अध्ययनले १ लाख जनसंख्यामा १२.४ प्रतिशतले आत्महत्या गर्ने जनाएको छ । २ सय ८७ वटा पोस्टमार्टम केसहरुलाई आधारमानी उक्त अध्ययन गरिएको थियो ।
सन् १९९६ देखि २००६ सम्म नेपालमा भएको माओवादी विदोहले व्यक्तिको मनोवैज्ञानिक पक्षका नराम्रोसँग प्रभाव पारेको तथ्यहरुसमेत सार्वजनिक भएका छन् । सरकारी पक्ष र विद्रोही पक्षको यातना, हिंसा, हत्याले धेरै व्यक्तिलाई मानसिक स्वास्थ्यमा नराम्रोसँग प्रभाव पारेको देखिएको छ । त्यसै गरी २०१५ मा आएको विनाशकारी भूकम्पले धेरै व्यक्तिको मनमा उथलपुथल बनाएको थियो । एक गैरसकारी संस्था महुसंस्कृति मनोसामाजिक संस्था नेपालले गोर्खा, सिन्धुपाल्चोक र काठमाडौंमा गरेको अनुसन्धानमा १०.९ प्रतिशत व्यक्तिहरुमा आत्महत्याको विचारहरु आएको पाइएको थियो । उक्त अध्ययन ५ सय १३ जना भुकम्प प्रभावित व्यक्तिहरुसँग गरिएको थियो । त्यसै गरी कोरोना भाइरसको पहिलो र दोश्रो लहरमा पनि आत्महत्या गर्ने दर बढेको थियो ।
यस्ता स–साना अनुसन्धानले प्रमाणीत गर्छ, नेपालका हरेक जिल्लाहरुमा आत्महत्या वा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरु बढिरहेका छन् । समस्याको व्यवस्थापनका लागि सरकारी भन्द गैरसरकारी संस्थाहरुले धेरै कामहरु गरिरहेका छन् । जसमध्ये आपतकालीन सहयोग प्रमुख हो । संघ संस्थाहरुले टोल फ्रि नम्बरहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् । उक्त सेवा लिनेहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ ।
नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यस्ता टोल फ्रिबाट मनोसामाजिक र मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरुको सेवालाई सहज बनाउन विभिन्न कार्यक्रमको तयारी थालेको छ । फलस्वरुप रीताजस्ता धेरै व्यक्तिलाई बाँच्न र जीवनमा केही गर्न प्रेरणा मिलेको छ । त्यसैले विषादीजन्य औषधीको पहुँचभन्दा टोल फ्रि नम्बरको पहुँच बढाउन सहयोग गर्नु सबै नेपालीको दायित्व हो ।
वासुदेव तिमिल्सिना असाेज ११, २०७८
विश्वका अग्ला १० हिमाल मध्ये ८ वटा हिमाल सर्वाेच्च शिखर सगरमाथादेखि विश्वको गहिरो खोंच रहेको देश नेपाल, विश्व पर्यटन जगतमा…
गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको मार्गचित्र
ऋषिराम पाण्डे असाेज ६, २०७८
१. पृष्ठभूमि देश र स्थानीय तहमा निर्वाचित, मनोनित तथा नियुक्त पदाधिकारी एवं कार्यरत कर्मचारीको क्षमता विकास, प्रदेश सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा…
संस्कार नै खराब भएपछि राजनीतिमा वृद्ध आऊन् कि युवा ?
दीपेन्द्रकुमार बिसी ‘दिपु’ भाद्र २७, २०७८
नेपालको राजनीतिमा युवाको नेतृत्व र हस्तक्षेपको सवाल आज भर्खरको आलोकाँचो सवाल होइन । यो त केही वर्ष अगाडिदेखि उठदै आएको…
के.वी. मसाल भाद्र २६, २०७८
मौसम परिवर्तन भएको छ । नेपालीहरुले घुमफिर गर्न रुचाउने मुख्य समय असोजबाट सुरु हुन्छ किनकि यो बेला मौसम पनि अनुकूल…
बाढी पहिरोको क्षति बढ्दो, पूर्व तयारी कम
दुर्गा अधिकारी भाद्र २६, २०७८
नेपालमा हरेक वर्ष मनसुनको समयमा सयौंको संख्यामा पहाडी भूभागमा पहिरो र तराई क्षेत्रमा बाढीले कैयौंको मृत्यु तथा करोडौं धनको क्षति…